Kapvera - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Cabo Verde)
I Kapvera dia firenena ao Afrika Andrefana, izay fitambarana nosy miisa folo sy nosy madinika miisa dimy, manana velaran-tany mirefy 4 033 km², nahazo ny fahaleovan-tenany tamin' ny taona 1975. Ny renivohiny dia Praia. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mizara vondrona roa ireo nosy ireo, dia ireo nosy Sotavento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) ao atsimo sy ireo nosy Barlavento (Boa Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão) ao avaratra. Atao hoe Cabo Verde ny anaran' io firenena io amin' ny teny pôrtogey.
Sainam-pirenen' i Kapvera
Saritany maneho an' i Kapvera eo anivon' izao tontolo izao
Mari-piandrianan' i Kapvera
Misy mponina miisa 499 000 tamin' ny taona 2013 fa 583 255 kosa izany tamin' ny taona 2020. Atao hoe Kapverdiana ny vahoanan' i Kapvera, izay maro safiotra taranak' ireo andevo afrikana taloha sy ny mpanjanatany eorôpeana (Pôrtogey). Kristiana katôlika ny ankamaroan' ny mponina ao. Ny fiteny pôrtogey no fiteny ôfisialy ao.
Niharan' ny haintany matetika nanomboka tamin' ny taona 1968 ity firenena ity. Ny antsasa-manilan' ny mponiana ao Kapvera dia tantsaka mpamboly na dia maina ny toetany ary tsy mahavokatra ny nofon-tany. Miankina amin' ny vola alefan' ireo Kapverdiana avy any amin'ny firenena hafa sy ny fanampiana ara-bola iraisam-pirenena ny toekaren' i Kapvera.
I Kapvera ao Afrika
Ny faritr' ora dia -1.
Sarin-tany maneho ireo nosy mamorona an' i Kapvera
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapvera&oldid=1040798"